511 Ny fivarotana Apple manerana an'izao tontolo izao dia misokatra ihany rehefa afaka 17 volana fanidiana tsy tapaka | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny farany tamin'ity herinandro ity, Apple dia afaka mirehareha amin'ny fisokafan'ny fivarotana rehetra eran'izao tontolo izao. ny 511 Misokatra ho an'ny besinimaro ny fivarotana ara-batana an'ny orinasa. Noho ny areti-mandringana nahafaly dia 17 volana no tsy nitrangan'izany.
Vaovao tsara, tsy misy fisalasalana. Ary tsy noho i Apple, satria afaka nanohitra tsy nisy olana maro tamin'ny fivarotana nakatona nandritra ny fotoana ela, noho ny varotra an-tserasera. Fa ho antsika rehetra, satria midika izany fa mandresy tsikelikely amin'ny ady atao amin'ireo voaozona isika Covid-19. Bravo.
rehefa 17 volana ny fanakatonana tsindraindray ao amin'ireo magazay samy hafa Apple aparitaka manerana ny planeta, ny 15 Jona 2021 dia voamarika tamin'ny tantaran'ny orinasa ho andro voalohany nisokatra ho an'ny besinimaro ireo fivarotana 511 Apple rehetra.
Ireo magazay Apple 511 dia amin'ny lafiny lehibe kokoa na ambany kokoa mavitrika manerana an'izao tontolo izao. Miankina amin'ny firenena, maro no manolotra fividianana mivantana any amin'ny magazay tsy misy fanendrena ary ny hafa kosa tsy misokatra afa-tsy amin'ny fakana entana amin'ny Internet, mifototra amin'ny fisavana ny talata maraina isaky ny toerana fivarotana ao amin'ny tranonkalan'i Apple.
Tsy nisy izany nanomboka tamin'izay Janoary 4 amin'ny 2020. Tamin'io andro io dia nanomboka nikatona ny magazay Apple tamin'ny faritra sasany noho ny areti-mandringana. Ary rehefa niely tamin'ny faritra samihafa amin'ny planeta ny viriosy, dia nikatona ireo fivarotana.
Miankina amin'ny fivoaran'ny tsimok'aretina any amin'ny firenena tsirairay avy, hisokatra indray ireo fivarotana, ary hikatona indray rehefa avy eo rehefa nitombo ny tahan'ny aretina. Nisy magazay nakatona ary nosokafana mandra-pahatongan'ny inefatra tao anatin'ny 17 volana lasa.
Ary farany, Apple dia afaka manamarina fa manana ny fivarotana ara-batana rehetra miasa. Famantarana iray hafa ihany koa fa miverina tsikelikely amin'ny fomba mahazatra iray isika, farafaharatsiny any amin'ireo firenena misy ny fizotrany vaksiny mandroso be io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fivarotana Apple 511 eran'izao tontolo izao dia misokatra ihany taorian'ny fanidiana fanakatonana maharitra 17 volana
Ekipa IKEA sy Sonos hanolotra ny rafitry ny mpandahateny SYMFONISK
Apple TV + tolotra maimaim-poana mandritra ny herintaona dia ahena ho telo volana